ကျောင်းနေချိန်တုန်းက သင်္ချာဘာသာမှာ အလွန်ညံ့ဖျင်းခဲ့ပေမဲ့ ယခုအခါမှာတော့ NASA မှာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး - Han Nyein Oo
ကျောင်းနေချိန်တုန်းက သင်္ချာဘာသာမှာ အလွန်ညံ့ဖျင်းခဲ့ပေမဲ့ ယခုအခါမှာတော့ NASA မှာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး
သင်္ချာဘာသာရပ်ဟာ လူအတော်များများက မကြိုက်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း သင်က အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ဖြစ်နေရင်တော့ ၎င်းဟာ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာမှာ မပါမဖြစ်ရှိရမဲ့အရာတစ်ခုပါဘဲ။အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်္ချာဟာ တကယ်ကျွမ်းကျင်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။သို့ပေမဲ့ ကျောင်းတုန်းက င်္သချာဘာသာညံ့လို့ ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ NASA မှာအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ် သူမကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။Josephine Santiago-Bond အမည်ရှိတဲ့အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ငယ်စဉ်အခါက ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်များကို ပြန်တွေးကာ “ ကျွန်မရဲ့ကလေးတစ်ယောက်အတွေးအနေနဲ့ ကောလိပ်တက်ရမယ် ၊ အလုပ်တစ်ခုရှာလုပ်ခဲ့တယ်၊ ကျွန်မလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့၀င်ငွေရအောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါမဲ့ အခုလို ပရောဖက်ရှင်နယ်အလုပ်မျိုးကိုတော့ တစ်ခါမှ စိတ်မကူးခဲ့ဖူးဘူး ” လို့ SPOT.ph သတင်းသို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်မိသားစုတစ်စုမှ မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး Josephine ဟာ မိသားစုရဲ့ခြေရာကို လိုက်ရန် စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။မိဘများနှင့်သူမရဲ့အစ်မများအားလုံးက PhDs ဘွဲ့များရခဲ့သော်လည်း သူမမှာ အထူးသဖြင့် သင်္ချာစာမှာညံ့တာကြောင့် မိသားစုများကဲ့သို့ ပရောဖက်ရှင်နယ်ကျတဲ့အလုပ်အကိုင်များကိုရဖို့ စိတ်မကူးခဲ့ပါဘူး။သူမဟာ ဖိလစ်ပိုင်သိပ္ပံအထက်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ အထူးသဖြင့်ကျောင်းဟာ ပုံမှန်ကျောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက သိပ္ပံပညာနှင့် သင်္ချာကို အလေးပေးသင်ကြားခဲ့တာကြောင့် သူမအခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အံ့သြစရာကောင်းတာက သူမဟာ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပေမဲ့ အသက်ကြီးတဲ့သူမရဲ့ကျောင်းနေဖက်တစ်ဦးကဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ်မှာ အီလက်ထရောနစ်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ယူရန် သူမအား စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ သူမမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း သူမဟာ သင်္ချာဘာသာရပ်နဲ့ရုန်းကန်ရင်း ကျောင်းမှာ ခက်ခဲနေခဲ့ရပါတယ်။
စာသင်နှစ်ကို သဘောသိပ်မကျခဲ့ပေမဲ့ သူမဟာ အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက် South Dakota State University ကနေ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက် သူမရဲ့ဘွဲ့ရအကြံပေးက နွေရာသီအတွက် John F. Kennedy Space Center (K.S.C. ) တွင် အလုပ်သင်၀င်ခွင့်ရမဲ့အကြောင်းကို သူမအား ပြောပြခဲ့တာကြောင့် သူမဟာ ကံကိုယုံပြီး စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူမအတွက် ၂၀၀၃ခုနှစ်ဟာ သူမအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ သူမဟာ အာကာသစင်တာတွင်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ Josephine ဟာ Kennedy Space Center ရှိသုတေသနနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအတွက်အင်ဂျင်နီယာအထောက်အပံ့များအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲရဲ့ အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။
သခ်ၤာဘာသာရပ္ဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက မႀကိဳက္တဲ့ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သင္က အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ၎ဟာ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာမွာ မပါမျဖစ္ရွိရမဲ့အရာတစ္ခုပါဘဲ။အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သခ်ၤာဟာ တကယ္ကြၽမ္းက်င္သင့္တဲ့အရာတစ္ခုပါ။သို႔ေပမဲ့ ေက်ာင္းတုန္းက သၤခ်ာဘာသာညံ့လို႔ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ NASA မွာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအျဖစ္ သူမကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။Josephine Santiago-Bond အမည္ရွိတဲ့အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးဟာ သူမရဲ႕ငယ္စဥ္အခါက ႐ိုးရွင္းတဲ့စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ားကို ျပန္ေတြးကာ “ ကြၽန္မရဲ႕ကေလးတစ္ေယာက္အေတြးအေနနဲ႔ ေကာလိပ္တက္ရမယ္ ၊ အလုပ္တစ္ခုရွာလုပ္ခဲ့တယ္၊ ကြၽန္မလိုခ်င္တဲ့အရာေတြကိုဝယ္ဖို႔ လုံေလာက္တဲ့၀င္ေငြရေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္၊ ဒါမဲ့ အခုလို ပေရာဖက္ရွင္နယ္အလုပ္မ်ိဳးကိုေတာ့ တစ္ခါမွ စိတ္မကူးခဲ့ဖူးဘူး ” လို႔ SPOT.ph သတင္းသို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။
သိပၸံပညာရွင္မိသားစုတစ္စုမွ ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီး Josephine ဟာ မိသားစုရဲ႕ေျခရာကို လိုက္ရန္ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါဘူး။မိဘမ်ားႏွင့္သူမရဲ႕အစ္မမ်ားအားလုံးက PhDs ဘြဲ႕မ်ားရခဲ့ေသာ္လည္း သူမမွာ အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာစာမွာညံ့တာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားကဲ့သို႔ ပေရာဖက္ရွင္နယ္က်တဲ့အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုရဖို႔ စိတ္မကူးခဲ့ပါဘူး။သူမဟာ ဖိလစ္ပိုင္သိပၸံအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ အထူးသျဖင့္ေက်ာင္းဟာ ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိပၸံပညာႏွင့္ သခ်ၤာကို အေလးေပးသင္ၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ သူမအခက္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက သူမဟာ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ဖို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိေပမဲ့ အသက္ႀကီးတဲ့သူမရဲ႕ေက်ာင္းေနဖက္တစ္ဦးကဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္မွာ အီလက္ထေရာနစ္နဲ႔ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ယူရန္ သူမအား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သို႔ေပမဲ့ သူမေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း သူမဟာ သခ်ၤာဘာသာရပ္နဲ႔႐ုန္းကန္ရင္း ေက်ာင္းမွာ ခက္ခဲေနခဲ့ရပါတယ္။
စာသင္ႏွစ္ကို သေဘာသိပ္မက်ခဲ့ေပမဲ့ သူမဟာ အေမရိကန္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ South Dakota State University ကေန လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေနာက္ သူမရဲ႕ဘြဲ႕ရအႀကံေပးက ေႏြရာသီအတြက္ John F. Kennedy Space Center (K.S.C. ) တြင္ အလုပ္သင္၀င္ခြင့္ရမဲ့အေၾကာင္းကို သူမအား ေျပာျပခဲ့တာေၾကာင့္ သူမဟာ ကံကိုယုံၿပီး စိန္ေခၚမႈတစ္ခုကို စတင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။သူမအတြက္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ဟာ သူမအေပၚမ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူမဟာ အာကာသစင္တာတြင္အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာေတာ့ Josephine ဟာ Kennedy Space Center ရွိသုေတသနႏွင့္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္အင္ဂ်င္နီယာအေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္တာဝန္ရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္အင္ဂ်င္နီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲရဲ႕ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဘဝကို သင်ဇာဝင့်ကျော်လိုပဲ ဖြတ်သန်းချင်နေပြီ ဆိုတဲ့ ပန် ဆယ် လို
သက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ ကလေးများကို လူငယ်ပြန်ဝန်ကြီးက ကျပ်သိန်း ၆၀၀၀ ကျော်ထောက်ပံ့